Facebook မှာ ကျွန်တော့် Page အသစ်လေးကို ၀င်ရောက်အားပေးကြပါဦးဗျ... https://www.facebook.com/AdvanceNetworkProfessional
Port No. တွေအကြောင်း
Task with Run
KmsPico လို့အမည်ရပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက Microsoft ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Version တွေဖြစ်တဲ့ Window7မှစပြီး Window 8 Enterprise N အထိကို Activate ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ Microsoft Office 2010 နဲ့ Office 2013 ကိုလဲ Activate ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
>>> ဒီမှာ ဒေါင်းပါ <<<
ရေးသားသူ Unknown at Saturday, May 11, 2013 No comments:
ကျွန်တော် အခုမှ စတည်ထောင်တဲ့ Facebook Page လေးပါ။
Advance Network Professional - ANP ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... ကျေးဇူးပြုပြီး Like လုပ်ပေးကြပါဗျ ...
ရေးသားသူ Unknown at Wednesday, May 08, 2013 No comments:
Task Killer ကို Android ပေါ်မှာဘာကြောင့်မသုံးသင့်သလဲ ?
Why You Shouldn’t UseaTask Killer On Android ?
တစ်ချို့က Task Killer application ဟာ Android Phone တစ်ခုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
ရေးသားသူ Unknown at Saturday, April 06, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : Task Killer ကို Android ပေါ်မှာဘာကြောင့်မသုံးသင့်သလဲ ?
Wireless Network Tools "Fing"
ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Android ပေါ်မှာ အသုံးပြုရမယ့် Fing လို့ခေါ်တဲ့ Wireless Tools လေးတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Tools လေးက ကျွန်တော်တို့တွေ Scan စစ်ရင် သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ Nmap နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ပြီးတော့
ခေါင်းစဉ် : Wireless Network Tools "Fing"
PS1 Game တွေကို Android ပေါ်မှာဆော့ကြရအောင်
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက ဆော့ခဲ့ကြဖူးတဲ့ Play Station 1 Game လေးတွေကို လွမ်းကောင်းလွမ်းနေကြမှာပါ။ အဲဒါတွေထဲမှာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ Harvest Moon Back to Nature လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု အဲဒီ Game လေးကို ကျွန်တော် Android ပေါ်မှာဆော့နေတယ်ဗျ။ အဲလို ဆော့ချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ ကျွန်တော် ရေးပြထားတဲ့ Instruction အတိုင်းလိုက်လုပ်လိုက်ရင် ဆော့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ရေးသားသူ Unknown at Wednesday, April 03, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : PS1 Game တွေကို Android ပေါ်မှာဆော့ကြရအောင်
CEH v7 - All Edition ebooks
CEH Version7မှာ Module-19 အထိရှိပါတယ်
ဒါကတော့ CEH version7ရဲ့ Modules 19 ခု အပါအ၀င် CEH Prep Guide ကိုဒေါင်းလို့ရနိုင်မယ့် Link ဖြစ်ပါတယ် > ဒီမှာဒေါင်းပါ
ဒါကတော့ CEH v7 ရဲ့ Instructor Module7ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
- Module 01 Introduction to Ethical Hacking
- Module 02 Footprinting and Reconnaissance
- Module 03 Scanning Networks
- Module 04 Enumeration
- Module 05 System Hacking
- Module 06 Trojans and Backdoors
- Module 07 Viruses and Worms
ဒါကတော့ CEH All in one Exam Guide ဖြစ်ပါတယ်။ Exam ဖြေမယ့်သူတွေအဆင်ပြေမှာပါ > ဒီမှာပါ
Admin of Myanmar ITgroup
ရေးသားသူ Unknown at Thursday, February 28, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : CEH v7 - All Edition ebooks
Command Line မှ Services များ Start/Stop ပြုလုပ်ခြင်း
ကျွန်တော် အရင်ကလည်း ဒီလို အလားတူ Post မျိုးကို တင်ပေးဖူးပါတယ် အခုက မေးထားတာလေးတွေ့လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ ...
Services.msc ထဲမှာ မလိုချင်တဲ့ Services တွေကို ပိတ်ကြပါတယ် Command Line က ပိတ်ကြည့်ရအောင်
net stop ဆိုတဲ့ Command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ရေးသားသူ Unknown at Saturday, February 23, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : Command Line
Microsoft Access Password Crack Tools
Microsoft Access ဆိုတာ Database တစ်မျိုးပါ ... သူ့ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုသလဲဆိုရင် Database လိုအပ်မယ့် Hardware Device တစ်ချို့မှာ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ရာ အသုံးပြုပါတယ်...
ဥပမာ အားဖြင့် - ကျွန်တော် တို့ ရုံးတက် ရုံးဆင်း မှတ်တမ်းတွေကို Record လုပ်ဖို့ရာ အသုံးပြုတဲ့ Finger Print နှိပ်ရတဲ့ စက်ကလေးတွေ သိကြမှာပါ... အဲဒီစက်မှာ နှိပ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး စက်မှာ Register လုပ်ရပါတယ်။ နံမည်နဲ့ လက်ဗွေ တွဲမိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် : Microsoft Access Password Crack Tools
USB Stick မှာ Software တွေ Application တွေ သွင်းခြင်း
USB Stick မှာ Software တွေ Application တွေ သွင်းထားပြီး ရောက်လေရာ Computer နဲ့ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ သိကြပါသလားဗျ ... မသိသေးရင် ပြောပြပါ့မယ်ဗျ ... application တွေ ထည့်သုံးဖို့ဆိုတာ ကွန်ပျူတာမှ သုံးနေတဲ့ application တွေကို Portable app တွေဖြစ်အောင် လုပ်ထားပေးတဲ့ ဟာလေးတွေကိုထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ဗျ ...
ရေးသားသူ Unknown at Wednesday, February 20, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : USB Stick မှာ Software တွေ Application တွေ သွင်းခြင်း
Facebook logout remote from other Computer or Phone
Internet ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် Facebook ကို သုံးမိလိုက်တယ် လောလောလောလောနဲ့ logout မလုပ်မိလိုက်ဘူး ဆိုပြီး စိတ်ပူတော်မူနေကြတဲ့ သားသားတို့ မီးမီးတို့ကို ရင်တမမနဲ့ ဖြစ်မနေပဲ စိတ်ချတော်မူစေဖို့ရာ ပြောပြပါ့မယ်....
- အရင်ဆုံး ကိုယ့် Facebook ကိုဝင်ပါ။
- Setting လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးသွားစိတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး Account Setting ကိုသွားပါ
- Security ဆိုတဲ့ Tab လေးကို ထပ်သွားလိုက်ပါ
- အဲဒီမှာ အောက်ဆုံးမှာ Active Sessions ဆိုတာရှိပါတယ် Edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျ
- အဲဒီမှာ ကိုယ်သုံးထားမိတဲ့ Time နဲ့ Device Type ကို စစ်ကြည့်ပြီး End Activity ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဗျ ... ဒါပါပဲ အဆင်မပြေရင် လက်ခုပ်မတီးပါနဲ့ :P
ခေါင်းစဉ် : Facebook logout remote from other Computer or Phone
တစ်ခြားစက်ထဲကို Command Line မှ ၀င်ရောက်ခြင်း
Command Line မှာ အသုံးချတဲ့ Script တွေကို ကောင်းကောင်းနောကြေနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါလေးက တော်တော်ကို အသုံးဝင်မှာပါ ... Remote Execute ဖြစ်ပါတယ်.
Command Line ကနေ Network တစ်ခုထဲမှာ ရှိတဲ့ တစ်ခြား စက်တစ်လုံးထဲကို ၀င်ရောက်နိုင်မယ် Script Program လေးဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် : တစ်ခြားစက်ထဲကို Command Line မှ ၀င်ရောက်ခြင်း
အမေးများနေတာလေး ကို ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ အားလုံးကို ပြောပြရင်းနဲ့ ဖြေပေးပါ့မယ် ...
Window 8 မှာ Play Store နဲ့ Window 8 app Store ၀င်သုံးလို့မရတာကို ဖြေရှင်းဖို့ ....
- ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
- Data Limit က 24 Hours ကို 300MB ဖြစ်ပါတယ်ဗျ
Android မှာ Play Store ၀င်လို့မရတာကို ဖြေရှင်းဖို့ ....
- ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျ
- Sign Up လုပ်ပြီး သုံးရင် Play Store ကို ကြိုက်သလောက်သာမွှေပေတော့ဗျို့ ...
ရေးသားသူ Unknown at Thursday, February 07, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : Window 8 မှာ Microsoft App Store သုံးလို့ရဖို့
Computer တစ်လုံးမှာ BIOS Password ခံထားတယ်ဆိုရင် BIOS Config ၀င်လုပ်လို့မရနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့က ဓါတ်ခဲဖြုတ်ကြပါတယ် Jumper Change ကြပါတယ်။ အဆင်ပြေသွားတာရှိသလို အဆင်မပြေလို့ ဆိုင်ပို့လိုက်ရတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အဲသလို ဆိုင်ပို့တော့ကော ဆိုင်က ဘာလုပ်ပေးတာလဲ ?
ဆိုင်က BIOS Model & Version တူနဲ့ Firmware Clone လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားပါတယ်။ ထားပါတော့လေ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်သမျှထဲမှာ များသောအားဖြင့် (များသောအားဖြင့်နော်) အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့ နည်းလေးကို Share ပေးပါမယ်။
- BIOS Password ရှိနေတဲ့ စက်မှာ ၃ ကြိမ်တိတိ အမှားရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း System Disabled ဘာညာဘာညာ ဆိုပြီး ဂဏန်းတွေနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
- ဒါကို ဒေါင်းပါ
- ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ BIOS_PW.EXE D:\_ အောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ထည့်လိုက်ပါ
- ပြီးရင် ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်း cmd ထဲမှာ ရိုက်လိုက်ပါဗျ
- cmd ကိုဖွင့်ပြီးရင် D: လို့ရိုက်လိုက်ရင် D:\_ အောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်
- bios_pw 144520လို့ရိုက်ရပါမယ် ( 14452 ဆိုတာ System Disabled အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ နံပါတ်ပါ)
ခေါင်းစဉ် : Remove BIOS Password
အောက်ပါ error တစ်ခုခု ပေါ်ပြီး Windows မတက်ခဲ့ရင် ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်
ရေးသားသူ Unknown at Friday, February 01, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : Windows Error
Android Game များကို Cheat / Hack လုပ်နည်း
Game CIH နဲ့ Android Game တွေကို Cheat လုပ်ကြည့်ရအောင်...
Cheat လုပ်တယ်ဆိုတာ လိမ်လည်လှည့်စားတယ်လို့တော့ Dictionary မှာရေးထားပါတယ်ဗျ ဟဲဟဲ ... Cheat Code တွေဆိုတာတော့ သိကြတယ်မှတ်လား ... အဲလိုပါပဲ ဒါပေမယ့် အဲလိုတော့ ပုံသေသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး... ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာယူရတာဗျ Game CIH က ...
- Game CIH ကို ဒီမှာအရင်ဒေါင်းပါ
- ကိုယ် Cheat လုပ်ချင်တဲ့ Game ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ကျွန်တော် ဥပမာအနေနဲ့ Fruit Ninja နဲ့ပြောပြပါ့မယ်ဗျ ..
ရေးသားသူ Unknown at Friday, January 18, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : Android Game များကို Cheat / Hack လုပ်နည်း
Java programming language အကြေ့ာင်းရေးမယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ် ဒါကြောင့်နေ့လည်က ကျွှန်တော် ပညာဒါန သင်တန်းပေးဖို့စာအုပ်တွေရိုက်ရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့Java ဘက်ခနလှည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ..။
ဟြေစရာရှိတော့မယ် ဟီ HTML တောင် 1 နဲ့ရပ်နေတယ် ။ဟုတ်ပါတယ် ကျွှန်တော်တ် 1 ဆိုစခဲ့ပီး2မှာဘာရေးရမှန်းမသိတော့လို့ပါ ဟဲဟဲ ။နောက်တာပါ ကျွှန်တော် အချိန်မပေးနိုင်သေးလို့ပါနောက်ဆိုလက်ရေးပေးသွားပါ့မယ် ဆရာပေသီး ရေ....။ :)
C++ တွေများတတ်ဘူးသူဆိုရင်တော့ ကလေးကလား နောက်သလိုဖြစ်နေမလားပါပဲ
ကဲပါ စလိုက်ရအောင် Java programming language က Sun Microsystems က၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်လောက်က မိတ်ဆက်ပေးပြီး ၊ ယခုအချိန်မှာတော့ အလွန်ကို အသုံးများတဲ့language တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
ရေးသားသူ Unknown at Sunday, January 06, 2013 No comments:
ခေါင်းစဉ် : programming language Java
Android Game များကို Cheat / Hack လုပ်နည်း (1)
ATM Card and Machine (1)
Auto မ run နိုင်တဲ့ Virus (1)
Blue Screen Error Code များ (1)
Built-in Administrator Account ကို Command Line မှ enable ပြုလုပ်ခြင်း (1)
CEH v7 - All Edition ebooks (1)
CMD ကို R-Click မှာပေါ်အောင်လုပ်ခြင်း (1)
Command Line ကနေ IPv4 ပေးရအောင် (1)
Delete လုပ်လို့ မရတဲ့ File များကို ဖျက်ခြင်း (1)
explorer.exe မတက်သည့်ပြသနာ (1)
Facebook logout remote from other Computer or Phone (1)
Gallery Lock ထဲကဟာတွေ Password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုပြန်ယူတော့မှာလဲ XD (1)
Guest account ကို Administrator account သို့ ပြောင်းလဲလိုပါသလား ? (1)
Happy Virus ဆိုတာကြားဖူးခဲ့ကြမှာပါဗျ .. အစမ်းသဘောလေးရေးကြည့်ကြမလား (1)
Hide File Extention ပျောက်ခြင်း (1)
Hotspot ခံထားတဲ့ Wireless Network ကိုဝင်ရောက်ခြင်း... (1)
HTML သင်ခန်းစာ(1) (1)
Microsoft Access Password Crack Tools (1)
Microsoft Office 2013 - Activator (1)
Mozilla Firefox ရဲ့ Setting တွေအကုန်လုံးကို Backupလုပ်ကြရအောင် (1)
Process Execute အသုံးပြုခြင်း (1)
Process တွေ Command Line ထဲက Kill ရအောင် (1)
programming language Java (1)
Proxy ကျော်ဖို့ Software ကောင်းကောင်း (1)
PS1 Game တွေကို Android ပေါ်မှာဆော့ကြရအောင် (1)
Recycle Bin ကို နံမည်ပြောင်းလို့ မရဘူးလား (1)
Restart အတွက် Shortcut Icon လေးတွေ လုပ်မလား (1)
Right Click နှိပ်ပြီး Copy to နှင့် Move to အသုံးပြုခြင်း (1)
Run Command များကို စုစည်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (1)
Shortcuts လေးနဲ့ လှလှပပ လုပ်ရအောင် (1)
Shutdown Time သတ်မှတ်ပေးခြင်း (1)
Shutdown Time ပေးခြင်း (၂) (1)
Software မသုံးပဲ Web Site တွေကို ပိတ်ပစ်ခြင်း (1)
Task Killer ကို Android ပေါ်မှာဘာကြောင့်မသုံးသင့်သလဲ ? (1)
Task Manager ကို Run လို့ရအောင်ပြန်လုပ်တဲ့ Batch File ပါ (1)
USB Stick မှာ Software တွေ Application တွေ သွင်းခြင်း (1)
User Account Password ဖျက်ပစ်ခြင်း (1)
User ကို Password ရိုက်စရာမလိုပဲ Automatic Logon ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း (1)
Virtual memory page file ကို ကွန်ပျူတာက Auto ရှင်းခြင်း (1)
Window 8 Pro Activator (1)
Window 8 မှာ Microsoft App Store သုံးလို့ရဖို့ (2)
Window 8 မှာအသုံးပြုလို့ရမယ့် Command List များ (1)
Window ကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း Start Up ဖြစ်ချင်ပါလား (1)
Window မှာ Password နှစ်ဆင့်ခံရအောင် (1)
Wireless Network Tools "Fing" (1)
ကိုယ့်စက်ထဲက Data တွေ သူများဆီ ပါမသွားဖို့ (1)
ကိုယ့်စက်မှာ Wireless Networks ဘယ်နှခုမိသလဲ (1)
ကဲ ဘယ်သူ့ကိုနောက်ချင်လဲ Prank Virus ပါ (1)
တစ်ခြားစက်ထဲကို Command Line မှ ၀င်ရောက်ခြင်း (1)
သိကောင်းစရာထက်ပိုတဲ့ Telnet အကြောင်း (1)
Facebook မှာ Share ဖို့
Mg Pay Thee
KmsPico လို့အမည်ရပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက Microsoft ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Version တွေဖြစ်တဲ့ Window7မှစပြီး Window 8 Enterprise N အထိကို Activa...
ကိုယ့်စက်မှာ Wireless Networks ဘယ်နှခုမိသလဲ
ဆိုပါတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Laptop ကွန်ပျူတာလေးက WiFi Adapter ပါတယ်ပေါ့ဗျာ.. ကိုယ့်စက်မှာ Wireless Connection တွေ ဘယ်လောက်မိနေလဲ အဲဒီမိနေတဲ့ Wireles...
Shutdown Time ပေးခြင်း (၂)
Run မှ cmd ဟုရိုက်ထည့်ပြီး အောက်ပါ စာကြောင်းများကို ရိုက်ထည့်ပါဗျ ကိုယ် သတ်မှတ်ချင်တဲ့ နာရီ ကိုထည့် ပေးလို့ရပါတယ် ... 24Hr နဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ...
Hotspot ခံထားတဲ့ Wireless Network ကိုဝင်ရောက်ခြင်း
Wireless နဲ့ Hotspot ခံပြီး ရောင်းစားတဲ့ Wifi Network ကို Hack လုပ်ဖို့ဆိုတာ မခဲယဉ်းပါဘူး XD ... အဲလိုရောင်းတဲ့ ကိုကို မမ တို့ရှိရင် သည်းခ...
Gallery Lock ထဲကဟာတွေ Password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုပြန်ယူတော့မှာလဲ XD
Android Application တွေထဲက လူကြိုက်များကြတဲ့ Gallery Lock ဟာဆိုရင် Photo တွေ Video တွေကို Password နဲ့ သိမ်းထားလို့ရတဲ့ Application တစ်ခုဖြ...
Microsoft Office 2013 - Activator
Microsoft Office 2013 - Activator ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ... ဆွဲလိုက်ကြပါ ဗျို့ ... http://205.196.120.249/ 1cwfe6i490qg/42hevx390b0at14...
ကျွန်တော် အခုမှ စတည်ထောင်တဲ့ Facebook Page လေးပါ။ Advance Network Professional - ANP ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... ကျေးဇူးပြုပြီး Like လုပ်ပေးကြပါ...
ကဲ ဘယ်သူ့ကိုနောက်ချင်လဲ Prank Virus ပါ ..
အောက်ပါစာများကိုကူးပြီးတော့ notepad ထဲထည့် ( .bat ) save ပြီး နောက်ချင်တဲ့သူရဲ့ စက်ထဲ မှာ မြင်သာနိုင်လောက်တဲ့နေရာ စိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့ နံမည်ေ...
User ကို Password ရိုက်စရာမလိုပဲ Automatic Logon ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း
Run Box ထဲကနေ netplwiz လို့ ရိုက်လိုက်ပါဗျ... User List ပါတဲ့ Window တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်... ကိုယ် Automatic Logon လုပ်ချင်တဲ့ User အောက်ပါ...
User Account Password ဖျက်ပစ်ခြင်း
ကွန်ပျူတာရဲ့ ဘယ် user account ရဲ့ password ကိုမဆို ဖျက်ပစ်ပြောင်းပစ်တဲ့နည်းပါ cmd ကိုဖွင့်လိုက်ပါ net user (admin) * လို့ ရိုက်ပြီး ...
p@ythee Co., Ltd.. Powered by Blogger.